सुहाना कुन फिल्मबाट फेरि आउलिन् ? « Mazzako Online
सुहाना कुन फिल्मबाट फेरि आउलिन् ?
अभिनेत्री तथा निर्देशक झरना थापा अहिले छोरी सुहाना थापाका तस्वीर दैनिकजसो सामाजिक संजाल फेसबुकमा राख्ने गर्छिन् । उनी, छोरी सुहाना फिल्मबाट अहिले केही पर भएपनि दर्शकमाझ सधै नै छाइरहुन् भन्ने सोचका साथ यसो गरिरहेकी छिन् ।
सुहानाका तस्वीर हेर्दा उनी बोल्ड र ब्यूटी देखिन्छिन् । सुहानाले अभिनय गरेको पहिलो फिल्म ए मेरो हजुर ३ बक्स अफिसमा हिट भएको थियो । यो फिल्म हिट भएपछि सुहानाको नामको चर्चा पनि भैरहेको छ । सुहाना कुन फिल्मबाट फिल्म क्षेत्रमा आउँछिन् भन्ने चर्चा चलिरहँदा उनलाई ए मेरो हजुर ४ वटा भागवत गीतामध्ये एक फिल्ममा देख्न पाइनेछ ।
भागवत गीताको कथा तयार छ । सुहानाले फिल्ममा काम गर्नका लागि यो कथामा अनमोलले पनि काम गर्नुपर्नेछ । अनमोलले भागवत गीताको कथा पढिसकेका छन् । तर, सुहानालाई कहिले पर्दामा देख्न पाइनेछ भन्ने दर्शकको संख्या भने धेरै छ ।